Soo dejisan WonderFox DVD Video Converter 20 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaWonderFox DVD Video Converter
Bogga rasmiga ah: WonderFox DVD Video Converter
WonderFox DVD Video Converter – qalab wax lagu duubo oo leh dhammaan muuqaalada lagama maarmaanka ah iyo waxqabad aad u fiican. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto feylkaaga, ka soo duubitaanka heesaha internetka ama soo qaad DVD-gaaga wixii ficil dheeraad ah leh. WonderFox DVD Video Converter waxay taageertaa qaabab badan oo fiidiyoow ah iyo bandhigyo si ay u doortaan calaamadda qalabka si loogu badalo fiidiyowga fiidiyo si habboon. Barnaamijka wuxuu awood u leeyahay inuu sawirro video, abuuro heeso, ku daro ama saaro subtitles, fiidiyo galiyo, abuuro nuqul nuqul ah DVD-ga la duubay, iwm. WonderFox DVD Video Converter wuxuu awood u leeyahay in uu u habeeyo qaabka maqalka iyo fiidiyowga inta DVD-ga lagu beddelayo nooca xalinta, heerka xaddiga iyo heerka qiyaasta. Software wuxuu leeyahay interface si fudud loo isticmaali karo oo leh waxyaabo muuqaal gaar ah.
Taageerida qaababka video ugu badnaa
Dib u soo celinta DVD-dukaanka
Ku dar ama ka saar subtitles
Daloolo ama ku dar fiidiyowyo
Dejinta isku dhafka
Soo dejisan WonderFox DVD Video Converter
Faallo ku saabsan WonderFox DVD Video Converter
WonderFox DVD Video Converter Xirfadaha la xiriira